RFP360: Teknolojiyada soo ifbaxaya ee xanuunka looga qaadayo RFPs | Martech Zone
Waxaan xirfadayda oo dhan ku qaatay iibinta softiweerka iyo suuqgeynta. Waxaan ku mashquulsanaa inaan keeno hogaamin kulul, dardar galinta wareega iibka, iyo ku guuleysiga heshiisyada - taas oo macnaheedu yahay inaan maal galiyay boqolaal saacadood oo noloshayda ah anigoo ka fikiraya, ka shaqeynaya waxna ka qabanaya RFPs - shar shar ah marka ay timaado ku guuleysiga ganacsi cusub .
RFPs waxay had iyo jeer dareemeen sidii warqad aan daba joogsi lahayn - geeddi-socod si xun u gaabis ah oo si aan macquul ahayn looga baahan yahay ugaarsiga jawaabaha maareynta wax soo saarka, isku dhacyada sharciga, arrimaha cilad-bixinta ee IT-da, iyo xaqiijinta lambarrada maaliyadeed. Kuwa yaqaanna way yaqaaniin - liistadu way sii socotaa. Suuqgeynta, iibinta iyo aqoonyahanada horumarinta ganacsiga waxay saacado aan tiro lahayn kubixiyaan sifeyn la’aan jawaabaha hore ee su'aalaha soo noqnoqda, baacsiga jawaabaha su'aalaha cusub, hubinta macluumaadka iyo raadinta ogolaanshaha marar badan. Nidaamku waa mid adag, waqti qaadanaya iyo culeys ku ah ilaha urur kasta.
In kasta oo isbeddelka degdegga ah ee tikniyoolajiyadda, ganacsiyado badan, hannaanka RFP uu aad uga yar is beddelay waayo-aragnimadayda bilowgii shaqadayda in ka badan toban sano ka hor. Kooxaha suuqgeynta ayaa wali adeegsanaya hababka gacanta si ay isugu keenaan talo soo jeedin, iyaga oo adeegsanaya jawaabo laga soo qaaday ilo kasta oo laga yaabo inay ku noolaan karaan xaashiyaha 'Excel', waraaqaha Google ee la wadaago iyo xitaa diiwaannada emaylka.
Taasi waxay tiri, kaliya ma ahan inaan si ba'an u rajeynayno in howlaha RFP ay noqdaan kuwa waxtar badan, warshaduhu waxay bilaabayaan inay dalbadaan, taas oo ah meesha software-ka soo baxaya uu u taagan yahay inuu saameyn weyn ku yeesho muuqaalka RFP.
Faa'iidooyinka Barnaamijka RFP
Marka laga soo tago in dhismaha RFP uu ka xanuun yaraado; dejinta hannaan deg deg ah, oo soo noqnoqda oo loogu talagalay RFPs waxay saameyn toos ah ku yeelan kartaa dakhliga. Halkani waa meesha tiknoolajiyada soo ifbaxaya ee RFP ay ku tallaabsaneyso.
Barnaamijka RFP wuxuu udub-dhexaad u yahay oo buuggaagta ku qorayaa su'aalaha guud iyo jawaabaha maktabadda waxyaabaha laga helo. Inta badan xalalkani waa daruur ku saleysan waxayna taageeraan wada shaqeynta waqtiga-dhabta ah ee udhaxeysa maareeyayaasha soo-jeedinta, khubarada mawduucyada iyo ansixinta heerka fulinta.
Khaas ahaan, RFP360 waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh:
Kaydi, raadi oo dib u isticmaal waxyaabaha ku jira Saldhig Aqooneed caadadiisu tahay
Kala shaqee shaqaalahaaga isla qaab isku mid ah oo dokumenti ah
U qoondee su'aalaha, raadraaca horumarka iyo xusuusinta otomaatiga
Kushabee jawaabaha AI oo cadeeya su'aalaha xulana jawaabta saxda ah
Soo gal Saldhigga Aqoonta oo ka shaqee soo jeedimaha ku jira Word, Excel iyo Chrome adigoo adeegsanaya fiilooyin.
Sidaas darteed, dadka isticmaala a RFP360Xalka maareynta soo jeedinta ayaa soo sheegay inay awoodaan inay si weyn u jaraan wadarta waqtiga jawaabta, kordhinta tirada RFP-yada ay awoodaan inay dhameystiraan isla mar ahaantaana, hagaajiyaan heerarkooda guud ee guuleysiga.
Waxaan ka jawaabnay 85 boqolkiiba RFPs ka badan sanadkaan sidii aan sameynay sanadkii hore, waxaanan kordhinay heerkayaga horumar 9%.
Erica Clausen-Lee, sarkaalka madaxa istiraatiijiyadda ee InfoMart
Jawaabaha dhaqsaha badan, waxaad heli doontaa fursado guud oo badan si aad ubixiso jawaabo isdaba-joog ah, sax ah oo hufan oo u badan inay ku guuleystaan ​​ganacsiga.
Kordhi Jiritaanka RFP
Adeegsiga Saldhigga Aqoonta ee barxadda, adeegsadayaashu si fudud ayey u keydin karaan, u abaabuli karaan, u raadin karaan oo dib u isticmaali karaan waxyaabaha la soo jeediyey ee hore, iyaga oo siinaya iyaga bilow bilow ah jawaabaha RFP. Xarun dhexe oo loogu talagalay soo-jeedinta maaddada ayaa ka ilaalisa kooxdaada dib-u-qorista jawaabaha jira, taas oo kuu oggolaaneysa inaad soo ururiso xogta oo aad hayso jawaabaha ugu fiican ee isticmaalka mustaqbalka.
Waxaan leenahay amniga ogaanshaha aqoonteenu inay nabad tahay oo iswaafaqsan tahay. Uma baahnin inaan ka walwalno inaan waayi doono khibrad kasta oo SME ah haddii qof ka tago ama qaato fasax. Ma qaadaneyno saacado aan ugaarsi ugu jirno jawaabihi hore oo aan isku dayeyno inaan ogaanno cidda sameyneysa maxaa yeelay dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha waxay ku yaalliin RFP360.
Beverly Blakely Jones oo ka socda National Geographic Learning | Daraasadda Kiiska Cengage
Hagaajinta Xaqiijinta RFP
Jawaabaha aan saxda ahayn ama dhacsan waxay noqon karaan kuwo khiyaano leh in la qabto, xitaa xubnaha ugu khibradda badan kooxda. Marka lagu daro waqtiga kama dambaysta ah ee degdegga ah ee loo yaqaan 'RFP', halista ah in la bixiyo xeryahooda macluumaad cilladaysan. Nasiib darrose, macluumaadka aan saxda ahayn sidoo kale wuxuu noqon karaa mid aad qaali u ah taas oo kugu kallifaysa ganacsiga aad hiigsanayso inaad raacdo. Jawaab celin aan sax ahayn oo RFP ah waxay u horseedi kartaa in laga saaro tixgelinta, wadahadalada dheeraaday, dib udhaca qandaraaska ama ka xun.
Barnaamijka RFP ee daruuriga ku saleysan ayaa wax ka qabta dhibaatadan iyada oo kooxaha u oggolaaneysa inay cusbooneysiiyaan jawaabahooda meel kasta waqti kasta iyada oo lagu kalsoon yahay ogaanshaha isbeddelka inuu ka muuqdo nidaamka ballaaran.
Tusaale ahaan, shaqeynta noocan ah waa aalad aad u wanaagsan oo la haysto marka badeecad ama adeeg uu maro cusbooneysiin isdaba-joog ah oo u baahan in lagu daro jawaabta caadiga ah. Xaalado badan, oo la soo gudboonaada isbeddelka noocan ah, kooxuhu waa inay ku dhex socdaan shax urur oo dhan si loo hubiyo in cusbooneysiinta loo qaato qaab-dhismeed ka dibna lala socdo xubin kasta si loo hubiyo in lagu sameeyay heer shaqsiyeed iyada oo waliba laba-hubinaysa soo-jeedin kasta kahor bax. Waa daal.
Barnaamijka RFP ee daruurta ku saleysan wuxuu maareeyaa isbedeladan ganacsiga oo dhan wuxuuna u adeegaa hal guri oo nadiif ah oo loogu talagalay waxyaabaha ka soo baxa.
In kor loo qaado waxtarka RFP
Faa'iidada ugu weyn ee barnaamijyada RFP waa sida ugu dhakhsaha badan ee waxtarka loo hagaajiyo - qaabkeeda, waqtiga ay ku qaadato in lagu dhiso RFP iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda noocan ah waxay la mid tahay farqiga u dhexeeya kaxeynta xeebta iyo duulista. Xalal badan oo barnaamijyada RFP ah, oo ay ku jiraan RFP360, sidoo kale waa daruur ku saleysan, taas oo u oggolaaneysa deg deg deg ah, taas oo macnaheedu yahay in natiijooyinka ay ku dhow yihiin deg deg ah.
Waqtiga la qiimeynayo (TtV) waa fikradda ah inay jirto saacad la socota inta ay macaamiisha ka qaadaneyso qandaraaska saxiixa ilaa 'ah-ha daqiiqad' markay si buuxda u fahmaan qiimaha ayna furfuraan kartida barnaamijka. Barnaamijka RFP, daqiiqadani waxay sida caadiga ah dhacdaa dhowr toddobaad ka dib markii qandaraaska la saxiixay markii isticmaalaha uu la shaqeynayo kooxda khibrada macaamiisha ee ugu horreysa RFP. Jawaabaha caadiga ah iyo soo-jeedinta ugu horreysa ayaa loo soo dhejiyaa nidaamka, ka dib daqiiqadda ah-ha - softiweerku wuxuu aqoonsadaa su'aalaha wuxuuna geliyaa jawaabaha saxda ah, isagoo ku dhammaystira celcelis ahaan qiyaastii 60 illaa 70 boqolkiiba RFP - daqiiqad gudaheed.
Waxaan ogaanay in isdhexgalka RFP360 uu ahaa midka ugu dareenka badan uguna fudud ee la kici karo oo la wadi karo. Waxaa noo yimid qalooca waxbarasho ee ugu yar, waxayna noo ogolaatay waxqabadkeenu inuu kordho isla markiiba.
Emily Tippins, Maamulaha Iibka ee Dayactirka Swish | Kiis barasho
Isbeddelka hannaanka RFP wuxuu siinayaa dadka isticmaala waqti ay dib ugu soo laabtaan si ay diiradda u saaraan dadaallada heerka sare, istiraatiijiyadeed.
Xaqiiqdii waxay naga dhigtay waxqabad badan. RFP360 waxay dib noogu soo celisay waqtigeenii waxayna noo ogolaatay inaan runtii doorano oo aan doorano mashaariicdeena. Mar dambe ma nihin waalan. Waxaan qaadan karnaa neef qoto dheer, waxaan diirada saareynaa inaan noqono istiraatiijiyad waxaana hubinaa inaan doorano mashaariicda saxda ah iyo inaan bixinno jawaabo tayo leh.
Brandon Fyffe, oo ah la-taliyaha horumarinta ganacsiga ee CareHere
Tiknoolajiyadda RFP Waa In Ay Tahay
Ganacsiga ka baxsan RFPs - Barnaamijka jawaabta kuma koobna oo kaliya RFPs, sidoo kale waad maamuli kartaa codsiyada macluumaadka (RFIs), amniga iyo su'aalaha su'aalaha adag (DDQs), codsiyada aqoonta (RFQs) iyo inbadan. Teknolojiyada waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo su'aal ah iyo foomka jawaabta oo leh jawaabo soo noqnoqda.
Adeegsiga-ugu-fiican fasalka iyo taageerada - Maahan in qof kasta oo ka shaqeeya RFPs uu yahay isticmaale aad u fiican. RFPs waxay ubaahantahay talobixin waaxyo badan iyo khabiiro mowduucyo leh heerar farsamo farsamo kaladuwan. Xulo xal si fudud loo isticmaalo loona fahmi karo taageerada macaamiisha aad u fiican.
Khibrad iyo xasilooni - Sida bixiyaha tikniyoolajiyadda SaaS oo kale, waxaad ka filan kartaa cusbooneysiin joogto ah iyo kor u qaadis teknoolojiyaddaada RFP, laakiin hubi inay shirkaddu leedahay waayo-aragnimo ay ku gaarsiiso astaamo dhab ah oo waxtar leh oo aad ku kalsoon tahay.
Base aqoonta - Xal kasta oo RFP waa inuu kujiraa xarun lagahelikaro oo laqaragsan karo taas oo u ogolaaneysa isticmaaleyaashaada inay si sahal ah ula shaqeeyaan isla markaana u bixiyaan cusbooneysiin ku saabsan jawaabaha loo qoray Raadi xal kaabaya AI si loo waafajiyo su'aalaha guud ee jawaabahooda.
Ku xirmooyin sirdoon iyo isku xirnaan - Teknolojiyada RFP waa inay la shaqeysaa barnaamijyada aad isticmaasho. Raadi fiilooyin kuu oggolaanaya inaad adeegsato saldhiggaaga aqoonta inta aad ka shaqeyneyso jawaabtaada barnaamijyada sida Word ama Excel. Barnaamijka softiweerku waa inuu sidoo kale la midoobo furaha CRM iyo codsiyada wax soo saarka si aan kala go 'lahayn u taageeri karo howlahaaga jira ee RFP
Waqti Yar oo lumiyo oo guuleysto RFPs badan
RFPs waxay ku saabsan yihiin guuleysiga. Waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan iibsadaha inuu go'aansado kan ugu fiican, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee aad u caddeyn karto in meheraddaadu ay ku habboon tahay biilka, ayaa ka sii fiican. Barnaamijka RFP wuxuu dardar gelinayaa howshaada si uu kuugu tixgeliyo si dhakhso leh, xirmo ganacsi badan oo ku siiyo xitaa fursado badan oo aad ku guuleysato.
Maaddaama kooxaha suuqgeyntu ay xitaa iswaafajinayaan oo ay iskaashi la leeyihiin howlaha dakhliga, tikniyoolajiyadda 'RFP' waxay xittaa muhiim u tahay geeddi-socodka. Baahida loo qabo jawaabaha degdega ah ee RFP ma soconeyso. Markaa ha sugin illaa intaad u qaadan weydo mar dambe inaad qaadato farsamo ku badbaadinaysa waqtigaaga RFPs-kaaga. Tartamayaashaadu hubaal ma yeeli doonaan.
Codso Demo RFP360
Tags: codsiga soo jeedintaRFPmadal rfpRfp360dayactirka swishwaqti in la qiimeeyottv